India: Lavin’ny fitsarana ny fanalàna zaza noho ny antony ara-pahasalamàna · Global Voices teny Malagasy
India: Lavin'ny fitsarana ny fanalàna zaza noho ny antony ara-pahasalamàna
Voadika ny 31 Desambra 2018 18:58 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, македонски, Français, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Nanintona ny saina tany amin'ny lalàna mifandray amin'ny IVG (fampitsaharana an-tsitrapo ny fitondrana vohoka) any India [amin'ny teny Anglisy] ny raharaham-pitsarana iray vao haingana. Araka ireo lalàna mihatra ankehitriny ao amin'ity firenena ity, tsy azo atao ny fanalàna zaza raha vao ao aorian'ny herinandro 20 nitondrana vohoka, raha tsy hoe voamarina fa mandrahona ny fahasalaman'ilay vehivavy ilay vohoka. Izany ary no nitranga tamin'ny mpivady iray, izay nihoatra ireo herinandro 20 ireo ny fotoana nitondrany vohoka nefa hita fa mitondra aretin'ny fo entina hatrany am-bohoka ilay zaza vao mitsaika, [amin'ny teny Anglisy]. Nangataka ny hamelan'ny fitsarana Indiana azy hanala zaza noho ny antony ara-pahasalamana ireto mpivady. Fa nolavin'ny fitsarana. Niteraka adihevitra ity raharaha ity.
Mametraka ahiahy amin'ny moraly miafina ambadiky ny fanapahankevitra noraisin'ny fitsarana ny blaogy an orange cat [amin'ny teny Anglisy].
Raha toa ka azo atao ny fanalàna zaza ao anatin'ny 20 herinandro, nahoana no tsy hihoatra izany?… Mahazo alalana ny fanalàna zaza mihoatra ny 20 herinandro raha toa ka mampidi-doza ny ain'ny reny. Fa na voakasika mafy na tsia ny zaza vao mitsaika, tsy ara-dalàna foana ny fanalana zaza mihoatra ny 20 herinandro. Rariny ve ny fiterahana zaza nefa fantatra fa tsy hiaina araka ny tokony ho izy izy? Samy maniry ny zaza hitombo ara-pahasalamana avokoa ny ray aman-dreny rehetra. Iza no te-hahita ny zanany hiantehatra tanteraka amin'ny pacemaker na fanampiana amin'ny fifohana rivotra manomboka eo amin'ny fahaterahany?
Ao amin'ny sehatra fifanakalozankevitra iray tao amin'ny MSN [amin'ny teny Anglisy], miteraka fanehoankevitra maro ny resaka fanalana zaza ho toy ny safidin'ny ray aman-dreny. Mampitaha ny fanalana zaza amin'ny famonoana olona ny mpaneho hevitra iray ary milaza: ”Amin'ity tranga ity dia fanamorana fahafatesana izany. Fa hanaiky ny hanesorana aina iray ve isika raha toa tsy efa fotoana ela taorian'ny fahaterahana no nitranga ny kilema toy izany ? Raha toa ka afaka mahatoky ny lazain'ny mpitsabo isika, nahoana no tsy hahatoky ny haifitsaboana ihany koa amin'ny resaka fikarakarana fitsaboana?” Mamaly ny mpaneho hevitra iray hafa : ”Fanapahankevitra mafy ho an'ny vehivavy rehetra (sy ny vadiny) ny fanalana zaza. Raha toa ka tsy vonona ara-tsaina sy ara-bola ny handray ny zanany ilay ho reny, aleo kokoa izy manala zaza toy izay hiteraka zaza tsy niriana”.
Manontany tena i Sameer Agarwal [amin'ny teny Anglisy] hoe inona no fiantraikany ho an'ilay zaza izay hahafantatra any aoriana fa zaza tsy niriana izy. Ao amin’ny blaogin'i Maami [amin'ny teny Anglisy] miombon-kevitra amin'ireo ray aman-dreny, sy amin'ilay zaza izay mety ho teraka miaraka amin'ny fahasembanana goavana ny fanehoankevitra maro. Manadihady ny anjara asan'ny siansa sy ny fivavahana any amin'ny lalàna mikasika ny fanalana zaza ny blaogy Chennai Television [amin'ny teny Anglisy]. Ny lafiny iray hafa amin'ilay olana dia raha toa ka fanalana zaza tsy ara-dalàna no tokony nataony, nangataka ny fitsarana ireto mpivady. Milaza ny Mumbai Metblogs [amin'ny teny Anglisy]:
Voalohany indrindra, tsy afaka ny hilaza isika fa misy olona an-jatony mangataka fanampiana any amin'ny fitsarana mba hanalana zaza. Manarak'izay, voatsipaka ilay olona tokana natoky ireo lalàna ary nampitongilana ny mizàna hankany amin'ny ilany tsara. Taorian'izany, tsy mieritrertra aho fa hanantena ny hahazo rariny ny olona amin'ny olana rehetra, na inona inona izany. Ny anatra azo tsoahina tamin'ilay tantara dia taorian'ny tranga toy izany, tsy hahatoky ny lalàna sy ny fitsarana intsony ny olona.
Ny olana iray hafa mipetraka dia ny fanararaotana amin'ny fampiasana ny lalàna izay hanome alalana ireo fanalana zaza mihoatra ny 20 herinandro nitondrana vohoka ary mety vao mainka mety hanasarotra ny olana izay efa misy mikasika ny fanalana zaza noho ny maha lahy na vavy ilay zaza [amin'ny teny Anglisy]. Na izany aza, ny fitsarana toa tsy vonona hamela antsika handinana ity lalàna ity, izay tsy novana efa an-taona maro izay [amin'ny teny Anglisy] ny fitsarana.
Toy ny nolazain'ny Dokotera Datar avy eo, handray anjara amin'ny fanentanana bebe kokoa ireo Indiana eo amin'ny tsy fahombiazan'ny lalàna ankehitriny sy ny filana fanovàna ny Toko faha-5 amin'ny lalàna MTP izay efa hatramin'ny 1971 ity ady ara-pitsarana ity. Mbola mamelona ny firehetam-po maro ihany ny olana eo amin'ny kalitaon'ny fiainana aorian'ny fahaterahana. Mila fanovàna ny lalàna ary mila miverina maka saina haingana ireo mpanao lalàna.
Indonezia 2 herinandro izay